5 Sifood Oo Lagu Garan Karo Jacaylka Aad U Qabto Lamaanahaaga Inuu Dhab Yahay - Aayaha
Home/XIRIIRKA IYO GUURKA/5 Sifood Oo Lagu Garan Karo Jacaylka Aad U Qabto Lamaanahaaga Inuu Dhab Yahay
Ma dhabbaa jaceylka aad u qabto lamaanahaaga? inaad ku raaxeysatid lammaanahaaga ama aad iibsato dhammaan waxyaabaha lacagtu u heli karto lamaanahaaga ma aha sabab loo dhihi karo si dhab ah ayaad u jeceshahay lamaanahaaga.
Halkaan ka akhriso siyaabo lagu ogaan karo jacaylka aad u qabto lamaanahaaga inuu yahay mid dhab ah.
Jacaylkaaga kama xadido lamaanahaaga xiriirada kale ee muhiimka ah
Jaceylkaagu waa mid daahir ah oo run ah hadii aad ku dhiiri galiso lamaanahaaga inuu la xiriiro qoyska iyo asxaabta. Ma dhihi kartid jacaylkaygu waa dhab marka aad ka xaddido lamaanahaaga inuu la xiriiro qoyska iyo asxaabta.
Markaad si dhab ah u jeceshahay lamaanahaaga, waxaad fahmeysaa muhiimadda xiriirka lamaanahaaga uu la leeyahay qoyskiisa / asxaabtiisa ama asxaabteeda.
Lamaanahaaga waxaad ku jeceshahay cilladihiisa
Ma sheegan kartid inaad si dhab ah u jeceshahay lamaanahaaga markii aadan jecleyn cilladaha lamaanahaaga. Markaad si run ah u jeceshahay lamaanahaaga, waxaad fahamsantahay inuusan jirin xiriir kaamil ah ama cillad la’aan ah.
Markaad si dhab ah u jeceshahay lamaanahaaga, waxaad diyaar u noqon doontaa inaad iska dhaafto waxyaabaha aad ka rajeyneysay lammaanaha kugu habboon adigoo ku jeclaanaya lammaanahaaga cidda uu isagu / iyadu run ahaantii ay tahay.
Jacaylkaagu waa dhab markaad diyaar u tahay inaad saaxiib la noqoto lamaanahaaga
Jacaylkaagu waa run markaad fahanto inaad qof jeclaato ay tahay hawl. Jaceylkaagu waa run markaad fahanto in jaceylka dhabta ah uusan sixir aheyn waxaadna diyaar u tahay inaad waqti iyo dadaal geliso sidii xiriirkaaga u shaqeyn lahaa.
Jaceylkaaga waa run marka aadan ahayn dad isjecel kaliya laakiin sidoo kale aad saaxiibbo tihiin. Jaceylkaagu waa run marka aad diyaar u tahay inaad garab istaagto lammaanahaaga markii xaalad adag ay timaado.
Jacaylkaagu waa dhab marka aadan qiimahaaga si lamaanahaaga aad u tusto inaad jeceshahay
Jaceylkaaga ma ahan mid dhab ah markii ay tahay inaad been u sheegto lamaanahaaga si aad u cadeyso jaceylkaaga. Jaceylkaaga ayaa dhab ah marka aadan ku qasbin lamaanahaaga inuu sameeyo waxaad rabto. Jaceylka dhabta ah ma badalo qofka, jaceylka dhabta ah ayaa inaga dhiga dad wanaagsan.
Jacaylkaagu waa dhab markaad wax walbo u hurto farxadda lamaanahaaga
Jaceylkaaga ayaa dhab ah marka aad ku faraxsan tahay inaad cunugga daryeesho saqda dhexe halka ay xaaskaagu heleyso nasiino aad loogu baahnaa. Jaceylkaaga ayaa dhab ah marka aad ka tanaasusho wax walba oo ay tahay inaad sameyso kaliya si aad u garab istaagto ninkaaga marka uu jiran yahay. Ma sheegan kartid jacaylkaagu inuu dhab yahay markii aadan diyaar u ahayn inaad wax hurto.
Si kalsooni leh ma u oran kartaa jacaylkeygu waa dhab?
9 Calaamadood Oo Lagu Garto Gabadha Noqon Doonta Xaas Wanaagsan
Haddii Ninka Aad La Socto Uu Leeyahay Saddexdaan Sifood Waa Nin Wanaagsan